Amazambane ama-recipe e-Baked nge-mustard
Indlu yasekhaya Ukupheka Okunye Izithako Izinongo namafutha Isinaphi
Amazambane abhakabhaka nge-mustard
Amazambane emakhambi nasemasinaphi Yiziphi izindlela zokupheka ezingekho: amazambane emahlumela ase-Italy, ama-breadcrumbs, ne-bacon kanye noshizi nokunye okunye okuhluka kule ndaba. Lesi sikhathi sasibhaka amazambane ngesinaphi. Isitsha esikhulu esinomsoco nesondlo. Amazambane angumkhiqizo jikelele. Kuyadingeka ukulifaka kuwo ama-herbs okubabayo futhi liguqula ngaphezu kokuqaphela. Ngaphezu kwalokho, "abangane" bamazambane nabo bonke imifino, inyama, inhlanzi nama-mushroom. Okunye okungaqinisekisiwe kanye namazambane ukutholakala kwawo. Ngaphezu kwalokho, izitsha ezivela kumazambane zifanele zonke izikhathi. Konke kuncike ekuphekeni kwayo. Kukhona kakade akukho mithetho. Isivivinyo sempilo!
Amazambane 1000 g
Garlic 3 izidakamizwa
I-Mustard 5 tsp.
I-Oregano eyomile i-1 tsp.
I-pepper emhlabathini omnyama 4 iphiniki
Amafutha e-sunflower ahlanjulisiwe ama-50 ml
Usawoti 1 tsp.
Isinyathelo 1 Kule recipe, thatha: amazambane, i-garlic, isinaphi (sakhetha isardadi evamile kanye nembewu 50/50), oregano omisiwe, umnyama omnyama, amafutha omifino.
Isinyathelo 2 Gwema amazambane bese uthatha iziqephu.
Isinyathelo 3 Bilisa amazambane emanzini anosawoti imizuzu engu-3-5.
Isinyathelo 4 Esikhathini, hlanganisa: lwesinaphi, u-garlic oyinyanyisiwe, amafutha omquba, i-oregano, umpela omnyama.
Isinyathelo 5 Gqugquzela i-marinade kahle ngemfoloko noma i-whisk.
Isinyathelo 6 Ngamazambane abilisiwe aphe amanzi, vumela ukuba uphole futhi ungeze ama-marinade.
Isinyathelo 7 Gqugquzela amazambane nge-marinade bese ushiya ukuma imizuzu engu-30.
Isinyathelo 8 Gcwalisa isitsha sokubhaka ngephepha lesikhumba. Beka ama-litata tincetu bese ubhake kuhhavini elushisayo ngaphambi kwe-200 ° C imizuzu engama-30-40 kuze kutholakale ukonakala kwegolide.
Ingulube yengulube nge lwesinaphi
Ingulube ibhaka kuhhavini
I-anyanisi isaladi yokugqoka
I-diaper ehlukumezekayo ngokuziqhenya kwengane
Yini okudingeka ukwenze ukuze wenze umfana akuhlangabezane nawe
Ungasusa kanjani izimbungulu ku-croup?
Ama-anic masks ezinwele
Zokupheka zasekhaya zezimonyo ezivela ezimbali: chamomile, rose, calendula
Izakhiwo ezihlukile zetshe le-alexandrite
Izitshalo zama-slides alpine
Izithelo ZamaMango: Izakhiwo Eziwusizo
Cuisine Japanese, sushi
I-Horoscope ye-2015 ye-Leo
Ukubikezelwa kwamanzi emanzini ngesikhathi sikaKhisimusi naseKhisimusi
Indlela yokwenza isifuba esikhulayo
Ukudla komuntu odala
Ungasiza kanjani ingane ukuba ithuthukise ukuzethemba futhi ikhulise ukuzethemba?
I-pizza ngenyama enobisi
Ngingakwazi yini ukulahlekelwa isisindo ngenkathi ngikwenza i-aerobics?